राजेन्द्र खड्गीको रिपोर्टमा एचआइभि पोजेटिभ ! -
७ मंसिर २०७७, आईतवार १०:३३ November 22, 2020 उधाेगिLeaveaComment on राजेन्द्र खड्गीको रिपोर्टमा एचआइभि पोजेटिभ !
काठमाण्डौं स्थित नर्भिक अस्पतालको लापर्वाहीका कारण कलाकार तथा द्वन्द्व निर्देशक राजेन्द्र खड्गीलाई एचआईभी एड्स देखिएको छ। उनले आफैले एउटा भिडियो मार्फत लापर्वाहीले आफुलाई एचआईभी देखिएको जानकारी दिएका हुन्।
नोभेम्वर १, २०२० मा नेपाली प्य्रांक मिनिस्टर नामक युट्युव च्यानलमा खड्गीको यस्तो जानकारीको खुलासा गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिडियोमा ट्याटु वनाईरहेका खड्गीलाई प्य्रांक गरिएको छ । ट्याटु वनाउँदा सिरिन्जको गलत प्रयोगले आफनो भाईलाई एचआईभि भएको भन्दै युट्युवरले त्यसको क्षतीपुर्ति ट्याटु वनाउनेले भर्नु पर्ने वताउँछन्।
त्यसै समयमा खड्गीले युट्युवरलाई एउटा मात्र अस्पतालको एउटा मात्रै रिपोर्टमा भरोसा नगर्न सल्लाह दिन्छन् । एउटा रिपोर्टका आधारमा एचआईभी भएको निस्कर्षमा नपुग्न सुझाउँदै उनले अस्पतालको रिपोर्ट गलत पनि हुने गरेको पुष्टि गर्न उनले आफनै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्।
‘नर्भिकमा चेक गर्दा मेरो पनि रिपोर्ट एचआइभी पोजेटिभ आयो। हामी कलाकार मान्छे धेरै केटीहरुसँग खेल्छौ’ उनले भनेका छन्–‘मेरो परिवार खतम हुने भो भन्ने लाग्यो। पहिला त मेरो मिसेज नै जाने भो भन्ने भयो।’
पछि फेरी चेक गर्न जाँदा भने रिपोर्ट नै गलत परेको भेटिएको उनले वताउँछन् । ‘म फेरी चेक गर्न गए। पहिला कस्ले चेक गरेको थियो, तिनीहरु भागे। शिव दाई, श्रीकृष्ण म सँगै गएका थियौं’ उनले भनेका छन्–‘अस्पतालका कर्मचारीले नै मिस्टेक गरेका रहेछन्, अरुको रिपोर्ट मेरो नाममा परेको रहेछ ।’ उक्त भिडियो वुधवारसम्म ७ लाख २८ हजारले हेरेका छन्।
खड्गी नेपालमा नाम चलेका द्वन्द्व निर्देशक हुन। उनले पाँच सयभन्दा बढी चलचित्रको द्वन्द्व निर्देशन गरेका छन् । प्रारम्भमा गोपाल भुटानीको सहायक भएर उनी नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन्।
होटल संघका निवर्तमान अध्यक्ष अमरमान शाक्यको कोरोना संक्रमणका कारण निधन
किन मन्दिरमा कुँदियो यौन आसनको आकृति ?
२७ पुष २०७७, सोमबार ०८:१२ January 11, 2021 उधाेगि
११ पुष २०७६, शुक्रबार १०:१३ December 27, 2019 उधाेगि
चाणक्यका अनमोल बाणीहरु
किन लगाउने जनै ? यस्तो छ वैज्ञानिक महत्व